Le nkwenkwezi ye-salum ivakatye rhoqo kwitafile. Uyazi ukuba ungayikhetha njani?
Ngokutsho kwe-GOST, i-caviar ebomvu ihlulwe ngamacandelo amabini: kwiiqanda zokuqala ziyafana, okwesibini kuvumela ubukhulu obuhlukeneyo kunye namaqanda eentlobo ezahlukeneyo ze-salmonids.
I-salmon nganye inomdla wayo, nangona ukwakhiwa kweprotheni yevithamini zayo zonke i-caviar zifana.
Owona mncinci: i-caviar yelitro-yellow yellow.
Eyona nkulu: i-caviar ye-chum salmon, ifikelela kwi-5-6 mm ububanzi, kunye ne-caviar yeentlanzi ze-Chinook zisiwe kwi-Red Fish Book-7 mm. Ukugqama okukhulu: phantse claret roe coho kunye nentlanzi ebomvu-e-chinook. I-rarest: caviar ye-salmon ye-sockeye, ephantse ichithwe.
Eyona nto idume kakhulu: i-orange, i-salmon i-salmon enkulu.
I-caviar yonke ebomvu i-granular: iinqununu zihlukana. Ngoko ke, zonke iipakethi kufuneka zitywinwe.
Hlola iifowuni - awukwazi ukuthenga izikhuni ezikhukhulayo okanye izitya. Kukho nawaphi na ukupakishwa kufuneka kuboniswe: ixesha lokuvelisa, indawo yokuvelisa i-caviar, ibakala layo, i-GOST okanye i-TU, apho umveliso wenziwa khona.
Makhe sifumane izibonelelo kunye neentsikelelo zeephakheji ezahlukeneyo ze-caviar.
Ingxowa yeglasi: iimpahla zicacile, unokukuqonda ngokukhawuleza ukuba ngaba oku kuqulethekile. I-Caviar ingcono kakhulu ukuba ingagcinwa ekukhanyeni, ukuze iivithamini zingatshatyalaliswa. Kweminye imiba, isitya seglasi sinokuthenjwa ngokupheleleyo.
I-Bank yaseBethel: awuyi kukwazi ukufumana ukuba umkhiqizo ungaphakathi uze uwuvule. Kodwa kwiikhenki, i-caviar igcinwe kakuhle.
Isitya sePlastiki: namhlanje kwiityuli ezinokuthi ufumane i-caviar kwiifom ze-plastiki ezinzima kunye nezikhuni ezixininisiweyo. Kwisitya esinjalo, amaqanda ayagcinwa kungekudala kwiglasi okanye isinyithi. Nangona kunjalo, le phakheji ikwajongwa njengekhuselekile xa igcina imithetho yokugcina. Ungaze uthenge i-caviar kwiiplastiki ezithambileyo ngaphandle "kwamanqaku okuchonga"! I-Caviar ibaluleke kakhulu: inzuzo enkulu kukuba ingahlolwa. Ngoko ngoko nangoko uyazi ukuba kukho ityuwa ngokwaneleyo, ingaba kukho nayiphi na iphunga elivuthayo. Ngakolunye uhlangothi, akukho mntu owaziyo ukuba le nto idliwayo "yayibuhlungu" ngaphantsi kweglasi yesitolo sangaphambili, kuba abathengisi banako "ukunweba" ixesha lokuhlala ubomi. I-Stale caviar ingakhokelela kwiingxaki zesisu.
Kwaye makhe sithethe malunga nendlela yokubona i-caviar enhle. Emva koko, ukuthenga isidlo esinzima, uya kuba nokwazi ukwahlula i-caviar yangempela kwi-fake.
Amaqanda kufuneka abe malunga nobukhulu obufanayo. Ngendlela, i-caviar encinci ibaluleka ngaphezu kwe-caviar enkulu-oku kuwuphawu lokuba umkhiqizo awukongezeli.
Ukubonakala, amaqanda okanye ujikelezo, ucinezela omnye nomnye, okanye ufana neebhola ezinemingxuma encinci. Phakathi kwazo akukho ukugquma okanye ukungafani kumbala.
I-caviar echanekileyo ikhupha ngokukhawuleza i-spoon's spoon, kodwa ngokuqinisekileyo igcina kwisandwich, ngaphandle kokuwa phantsi xa ithoxisiwe.
Uthunga kakuhle - inkohlakalo enentlanzi ayinakuvakala. Phezulu kwesikhupha seqanda, iifilimu, i-plaque okanye i-sediment ecocekileyo ayivumelekanga.
Kwindlela yokwakhiwa kwe-caviar kuphela, ityuwa kunye nokulondolozwa, ngokukhethekileyo kwixabiso elincinci. Iingqungquthela zithanda i-caviar yokuzaliswa kwehlobo (khangela umhla wokuphuhliswa): ubusika kuthathwa njengento encinane
I-Caviar yinto ephosakeleyo, "imveliso". Nangona emva kweentsuku ezimbalwa ekushiseni, kuya kuhamba, kutshintsha umbala, ukunambitha kunye neepropati. Ukukhuselwa kwezi ngxaki kubonelela ngokukhusela. Uninzi lwawo lwangaphambili lutyuwa. Ukugcina amaqanda ngeenyanga, kubalulekile ukuba ubuncinane ubuncinane i-4% yomkhiqizo ubuninzi beetyuwa. Ukuba ezinye - ziphanga i-caviar, ukuba i-less-it begins to putrefactive processes. I-caviar engaphezulu iyabiza, intsikelelo ebuthakathaka yetyuwa.
I-caviar enamanzi ingagcinwa malunga neenyanga ezi-2. Ukwandisa eli xesha, izilondolozo zingenakunyuswa. Ngokuqhelekileyo, ngokukodwa kwiimeko zobugcisa, i-caviar inokugcinwa kunye nokusetyenziswa kwe-urotropine ye-antiseptic (E239). Inetyhefu kwaye inika uphawu olumnkqenkqenkqisayo kumveliso. Olunye ulondolozo oludumileyo alude lube luncedo lwe-asidi ye-sorbic (E200).
Ewe, ukuba uyifumana kwilebula uphawu lwe-additive "Vareks". Ityathwa njengekhuselekile kumthengi kwaye ilondoloza ubomi beshefu yomkhiqizo.
"Ukukhula" kwe-caviar, ukulahlekelwa ngamanzi. Ngoko ke, i-glycerin, ioli yemifino kunye nezinye izinto ezikhuselekileyo zinokufakwa kwi-caviar ukugcina imbonakalo ebonakalayo.
Ngenkulungwane ye-XX kwakunomdla wokudibanisa, okufana nokubonakala kwe-caviar ye-salmonids. Kodwa le mveliso ayifumananga ukuqaphela jikelele: intle "yamaqanda" ihluke kakhulu kulezi zinto. Zenziwe nge-gelatin kunye namaqanda abamhlophe kunye nama-flavour and flavor enhancer.
Ngamanye amaxesha inzala iyadalwa kwisibindi sokulumba kunye nekhodi. Umbala obomvu unikezelwa kwimveliso ngababala. I-caviar yokufakelwa kufuneka ibe neendleko ezintathu ukuya kwesine ngaphantsi kweli.
Yathengela ibhotile kwisiqandisisi, kodwa kungekhona efrijini - kukho amaqanda aya kuphazamiseka, aze ahlabe, aphenduke umonakalo. Kwaye ngaphambi kokukhonza, shuthuma amaqanda ngemitha eyi-15-20 kwiqondo lokushisa. Ipholile, inqabileyo, kodwa intambo ivula ngokupheleleyo, kuphela ekushiseni. Beka i-caviar kwi-rosettes kwaye usebenze ngeepuni ze-champagne brut.
Kulokhoya kunye ne-caviar yekhwalithi ibhaliwe: "IGOST R 52336-2005, iSalmon roe caviar", idilesi yomenzi kunye neholide yokuphila kubonisiwe. Kwiinkani zensimbi, zonke iinombolo zifakwe ngaphakathi ngaphakathi (ukuba zixinzezelwe ngaphakathi, oku kuwuphawu olubonakalayo lwenkohliso), amajoyina ayabonakala engabonakaliyo, iinjongo zikhona.
Xa ugubha, akukho nto igugu ngaphakathi kwaye ayifumananga.
I-Caviar igcinwe kwifriji kwiqondo lokushisa kwama-14 degrees ngaphantsi kwe-zero, kwaye kungekhona kwi-counter counter.
Ungasusa njani idayi elidala lokugcoba kwiingubo
Ungatshintsha njani ubomi ukuze ube ngcono?
Izizathu zokunganakwa, indlela yokujongana nokunganakwa
Izindlela eziza kunceda ufunde ngomntu ongaphezulu
Abahlobo bacinga ukuba isithandwa sam sisimangalisa, ngaba kunjalo?
I-salmon yonyaka omtsha kunye nemifuno
Ubusi bembethe ngokumelene ne-cellulite
Indlela yokuhlambulula impahla kwi-glue
Ukuxhamla, njengobungakanani bomzimba womntu